Sanchez oo sheegay in uu arkay Messi oo guul darro la ooyaya | Ciyaaro Online
Home - CIYAARAHA CAALAMKA - Sanchez oo sheegay in uu arkay Messi oo guul darro la ooyaya
Sanchez oo sheegay in uu arkay Messi oo guul darro la ooyaya
Weeraryahanka Xulka Qaranka Chile iyo Kooxda Man United Alexis Sanchez,ayaa shaaca ka qaaday in isaga uu la kulmay Lionel Messi oo ku ooyaya qolka lebbiska ee Kooxda Barcelona.
Xiddiggan oo dhawaan wareysi siiyay Weeryahankii hore ee Arsenal iyo Xulka France ,Thierry Henry ayaa sheegay in isaga uu la hadlay Messi oo ooyaya kaddib guul darro kooxda ka soo gaartay Kooxda ka ciyaarta Horyaalka England ee Chelsea.
Messi iyo Sanchez ayaa Kooxda Barceloma mar u wada xiyaarayay intii u dhaxeysay 2011/2014,waxaana uu xusay in guul darro sami finalka Koobka UCL ee Qaaradda Europe ee ka soo gaartay Chelsea uu la ooyay.
“Messi ayaa isaga ooyay qolka lebbiska,annaga inteenna kale murug waan dareemeyney laakiin Messi,waxaa uu na dheeraa ooyin,innaga ayaa aamusinnay “ayuu yiri Sanchez.
Sanchez ayaa sheegay in ciyaaryahanka ay jiraan duruufo ku kallifa in uu ooyo sida in uu la kulmo guul darro dhinaca ciyaaraha ah,in uu waayo qof ka mid ah qoyskiisa oo geeriyooda isaga oo aan joogin,in uu ka qeybgeli waayo sanadguudarada xaaskiisa,ubadkiisa iyo dadka qaaliga ku ah.